Isikhundla segama elingukhiye lesizinda sakho
ULwesibili, April 21, 2015 ULwesibili, April 21, 2015 Douglas Karr
Ukhiye wecebo lokumaketha le-injini yokusesha eliphumelelayo ukuqonda amagama asemqoka izivakashi zenjini yokusesha ezisebenzisela ukuthola inkampani yakho. Ungamangala ukuthi zingaki izinkampani engikhuluma nazo ezingazange zenze ucwaningo lwamagama asemqoka.
Umphumela wokungenzi ucwaningo ngecebo lokumaketha eliku-inthanethi ukuthi inkampani yakho ivele ihlonzwe ngemigomo engabalulekile - ukuheha izivakashi ezingalungile kuwebhusayithi yakho noma kubhulogi. I-Google inokulula ithuluzi elingukhiye elisuselwa kusesho ehlaziya isiza sakho futhi ikunikeze ngempendulo ngamagama asemqoka nemisho etholakele… isiqalo esihle sokubona ukuthi usendleleni efanele yini.
Njengoba uqhubeka nokuqapha amagama akho angukhiye nesayithi lakho, I-Google Search Console inikeza umlando wemigomo otholakale kuzinjini zokusesha, kanye nemigomo abacwaningi abachofoza ngayo kuwebhusayithi yakho.
Kodwa-ke, okumangazayo ukuthi awekho amathuluzi we-Google abeka lonke isu ndawonye kuthuluzi lamathuluzi eliphelele lezinkampani ukuhlaziya amagama asemqoka, ziwaqhathanise nomncintiswano, futhi zilandelele amazinga weviki. Yilapho-ke Semrush engena esithombeni.
Semrush iyithuluzi lamathuluzi eliqinile ngokumangalisayo lokuhlaziywa kwegama elingukhiye nokuSesha. Nalu uhlu olufushane lwezici:
Thola amasayithi ezincintisana nawo ngamagama angukhiye ajwayelekile e-Google
Thola uhlu lwamagama angukhiye we-Google wanoma iyiphi isayithi
Thola uhlu lwamagama angukhiye we-AdWords wanoma iyiphi isayithi
Bheka izimbangi zakho zokufika kwamakhasi ukuthola ithrafikhi ye-SE ne-AdWords
Phenya amagama angukhiye anomsila omude kunoma yisiphi isizinda
Thola ithrafikhi elinganiselwa ku-SE ne-AdWords yanoma isiphi isizinda
Bona ukusetshenziswa kwamasayithi kwe-AdWords
Thola amagama angukhiye ahlobene afihliwe (namanani aphansi) ukuthuthukisa umkhankaso wakho we-AdWords
Thola abakhangisi abangaba khona banoma iyiphi isayithi
Thola abathengisi be-traffic abangaba khona besiza sakho
Futhi manje ngokwethulwa kwe- I-algorithm yeGoogle iyashintsha ukuqinisekisa imiphumela yosesho lweselula babe nezindawo ezenzelwe amaselula kuphela, Semrush yethule nokuqapha kosesho lweselula!
Ukuhlola ubungani beselula bewebhusayithi, iya ku- Semrush Sibutsetelo, bese ufaka igama lewebhusayithi. Phezulu kombiko, uzobona isikhethi esivumela ukuthi ushintshe kusuka kudatha yedeskithophu uye kudatha yeselula. Chofoza isithonjana esifanele ukubuka iselula analytics idatha futhi ubonise ukubonakala kwewebhusayithi kumadivayisi eselula.
Iwijethi Yokusebenza Kwamaselula ikhombisa isilinganiso sama-URL ewebhusayithi yakho avele kuma-SERP anelebula “elisebenziseka kalula,” kulabo abangenawo.
Igrafu Yokusebenza Kosesho ikhombisa inani lamagama asemqoka iwebhusayithi elilinganiselwe kuwo emiphumeleni yosesho ephezulu yeselula engu-20 ekhokhelwe ye-Google.
Ishadi le-Position Distribution likhombisa ukusatshalaliswa kwamagama asemqoka i-webhusayithi elikleliswe kuwo emiphumeleni yosesho lweselula engu-20 ephezulu yakwaGoogle.
Imiphumela iqoqwe nge mobile-nobungane futhi umakhalekhukhwini-awunabo ubungani izindlela. Ungabona amagama akho aphezulu aphezulu.
Ungahlola futhi izimbangi zakho eziphezulu kusesho lweselula.
Ungabona idatha efanayo yemiphumela yosesho ekhokhelwayo.
Ukubona ukuthi iwebhusayithi ikleliswe kanjani emiphumeleni yokusesha ye-organic organic, iya ku- Semrush → Ucwaningo lwe-Organic → Izikhundla. Lo mbiko ubala amagama asemqoka lapho iwebhusayithi ikleliswa khona emiphumeleni yosesho lweselula engama-20 ephezulu yakwa-Google, kanye nesimo sesizinda salowo nalowo kubo.
Ama-URL anelebula mobile-nobungane emiphumeleni yokucinga izomakwa ngophawu lwefoni ephathekayo
Inani eliphezulu lamakhasi ewebhu ngaphandle kwalesi sithonjana kufanele lithathwe njengesixwayiso, ngoba iwebhusayithi yakho ingajeziswa. Ukugwema ukujeziswa okuvela kwaGoogle nokuthuthukisa ulwazi lwabasebenzisi lokusesha ngeselula kuwebhusayithi yakho, kufanele ukwandise amakhasi wakho wewebhu ngokuya ngemikhuba evumelana namaselula. Sincoma ukwakhiwa kwewebhu okuphendulayo.
Ukubona amagama angukhiye amathemba akho namakhasimende akho okusebenzisela ukukuthola ngezinjini zokucinga kubalulekile empumelelweni yakho. Ukwenza iwebhusayithi enhle, efundisayo, esezingeni lomhlaba akusizi ngalutho uma kungatholakali ngosesho olufanele! Ibhulogi yami empeleni iyisibonelo esihle… Ngikhulise isayithi ngokoqobo futhi ngavele ngaqhubeka nokungeza okuqukethwe njengoba ngikuthole kuthakazelisa. Manje mina qapha isikhundla segama elingukhiye njalo!
Umphumela uba ukuthi omgwaqo wami ofanele utholwe ngamazinga ezinjini zokusesha eziphilayo. Ukube ngenze ukuhlaziywa kwamagama angukhiye okuphelele ama-blog ayi-1,600 edlule futhi ngenza isiqiniseko sokuthi ngiwasebenzisa kahle lawo magama, angingabazi ukuthi bengizohola iphakethe ezihlokweni eziningi zobuchwepheshe bokumaketha.
Tags: amazinga okusesha we-desktopthola isikhundlaeliyisihluthuleloisikhundla segama elingukhiyeamazinga okusesha weselulaisikhundla ngegama elingukhiyesemrush
Jul 13, 2015 ngo-11: 31 PM